Raha tokony ho 'Miala tsiny amin'ny famoizana anao' dia manehoa fiaraha-miory amin'ireto fehezanteny ireto - Blog
Tsy misy isalasalana momba izany, ny fiaraha-miory dia mety hahasadaikatra izaitsizy.
Ny faniriana dia ny hizara ny alahelonao amin'ny olona iray hafa izay mbola malahelo kokoa aza, saingy tsy dia mety loatra izany, sa tsy izany?
Na dia amin'ny fotoana fohy aza, ianao hahatsapa izany: volom-borona manjavozavo fa tsy famihinana fampiononana.
Ny zavatra farany tianao hatao dia ny manampy ny fanaintainan'izy ireo, na amin'ny fotoam-pandevenana marina izany na amin'ny fotoana efa niverenan'ny alahelo amin'ny raharaham-pirenena.
Ka amin'ny ankapobeny dia miteny izahay hoe 'Miala tsiny amin'ny famoizanao.'
Na izany aza, misy teny efatra ve izay mihalalina ao anatiny ary mavesatra kokoa noho ireo famantarana efatra amin'ny isa tsy fahazoana aina?
Nanjary be mpampiasa loatra ity andianteny ity ka tsy misy fomba handrenesana azy ho zavatra hafa ankoatry ny faneriterena - fihetsika famantarana - ary na dia tsara aza ny dikany dia bara daholo ny teny rehetra.
“Miala tsiny” mametraka ny alahelo ao amin'ny toerana meloka. Na dia iharan'ny alahelo aza isika dia tsy maniry ny hijaly ho antsika ny hafa.
Miala tsiny fa ilay teny henontsika avy amin'ny olona iray izay nanao ratsy taminay, saingy ao anatin'ny tontolon'ny alahelo, lasa lasa nanota taminao izahay noho ny enta-mavesatra ara-pihetseham-po izay ezahinao hialana.
'Ho an'ny' lasa ny tsipika mivantana mampifandray ny maty ny maty amin'ny alahelo anao.
'Ny' mitokantokana ireo ory, miteny an-tsakany sy an-davany fa na mety ianao aza mahatsapa fangorahana ho azy ireo, ny tena famoizana dia azy ireo ny miatrika fa tsy anao.
“Fahaverezana.” Toy ny hoe afaka nihazona ireo namoy havana. Toy ny hoe tsy afaka nitazona ny fiainana ho an'ny olon-tiany izy ireo.
Fahaverezana. Nisy olona lasa, ary tsy afaka mamerina azy ireo ireo maty.
Na aiza na aiza no itodihan'izy ireo dia tsy hahita azy ireo.
Ny zava-drehetra nisy an'io olona io dia tsy eo intsony.
Ireo kofehy mpampifandray rehetra amin'izy ireo? Naratra.
Ilay maty alahelo, amin'ny maha sisa velona azy, dia irery.
Izao rehetra izao dia maratra mandritra ny fofona iray. “Miala tsiny amin'ny fahaverezanao.”
Fa amin'ny fanoloran-tenanao fampiononana, tsy fantatrao izany satria ilay nalahelo dia mila tsiky kely, fifamihinana haingana, ary - angamba mandritra ny fotoana maromaro alohan'ny anao - dia nahatohitra ny ranomasony tamim-pahombiazana mba hiteny hoe: “Misaotra. ”
Afaka manao tsaratsara kokoa ve isika? Mihevitra aho fa afaka.
Manana izany ao amintsika isika mba hilefitra amin'ny fangorahantsika, ho tena marina amin'ny fanampiantsika, ary tena tsy hatahotra ny ho eo ho an'ny olona iray.
Inona no holazaina amin'ny toe-javatra tsy dia ampy ny teny?
1. Eto ho anao aho
Ity dia mety ho iray amin'ireo zavatra matanjaka indrindra holazaina amin'ny olona malahelo. 'Ho anao aho.'
Tsy tokony ho be dia be ny fangorahana ny fihetseham-po ny fangorahana dia tsy toy ny lalao karnavaly nahatratra ambaratonga iray hampaneno lakolosy.
Tokony hampiroborobo ny fahatsiarovan-tena fa hanana toerana ho an'ny hafa ianao, na izany aza dia ilain'izy ireo sy amin'ny fotoanany izany, avelany handatsaka ao aminao ny maty mba hialan-tsasatra, hanasitrana ary hamerina ny fahatsapana fifandraisana aorian'ny fikorontanan'ny famaranana Veloma.
Miaraka amin'ny fikasihana - angamba famihinana (ny fifamihinana matetika no miasa tsara indrindra) , angamba ny fandraisana an-tanana malefaka, hoy ny fotoana - ity fehezanteny ity dia milaza amin'ireo maty vady fa tsy irery izy ireo…
… Tsy irery amin'ny alahelo, tsy amin'ny fahatsapan'izy ireo irery, fa tsy amin'ny fiatrehana tsy fahatokisana tampoka sy goavana.
ny fomba fanaovana andro iray handeha haingana
Rehefa mandalo fitsapana isika, na dia (na indrindra) ireo fisedrana mahazatra indrindra, tsy azo ihodivirana, fitsidihana an'izao tontolo izao tsy hita isa isan'andro, fahafatesana, ny zavatra tsara indrindra azontsika dia ny fanomezan-toky fa tsy irery isika.
2. Fiadanana Ary Milamina
Mandeha mafy sy haingana ny fahafatesana rehefa mitondra ny vaovaon'ny fahafatesany, ka manjary misavoritaka sy tsy mahazo antoka ny fitondrantsika isika rehefa misosa ao anaty vovoky ny fandalovany. Ny zavatra mahazatra rehetra dia manjary tsy hay lazaina ary mampivarahontsana.
Ny faniriana olona iray 'Fiadanam-po ary ho salama' na inona na inona fiovan'io andianteny io izay mahatsapa fa mahazo aina amin'ny lela, dia hery matanjaka sy maharitra.
Mampahafantatra an'izay maty izany azo atao ny fihavanana , ary ny habetsaky ny tanjaka amin'izany fanomezan-toky izany dia mety ho andriamanitra ho an'ny olona iray izay mahazo fatiantoka.
'Salama' hoy ny fanekena ny aretina miolakolaka mety ho tsapan'izy ireo.
Miaraka, ny fandriam-pahalemana sy ny fahasalamana dia mamorona faniriana avy amin'ny iray amin'ny tanjaky ny hery mankany amin'ny iray izay mila fanantenana ankehitriny, manome fahatsapana mazava ho avy.
Na dia tsy mahatsapa ho toy ny hoe tsy lavitra aza ny fandriam-pahalemana, dia te hahalala izany isika.
3. Manana ny foko sy mpanohana anao ianao
Toy ny hoe 'Eto ho anao aho,' 'Manana ny foko sy ny fanampiako ianao' dia mampifandray ny helodrano tampoka avy amin'ny fiaraha-monina ka mitoka-monina ny fahafatesana mety hiteraka ao an-tsain'ny olona iray miatrika fatiantoka toy izany.
Ny 'foko' dia manosika ny sisin'ny alahelo ifampizarana amin'ny fomba 'miala tsiny', 'alahelo', na izay fiovaovan'io teny volondavenona sy feno alahelo io dia tsy mahatratra ny zava-bita.
'Manana ny foko sy ny fanohananako ianao' dia tsy fampahatsiahivana ny amin'ny fahaverezan'ny fomba 'Miala tsiny amin'ny fahaverezanao', fa a fampanantenan'ny firaisankina na manao ahoana na manao ahoana ny alahelo manandrana manapotika ny fahatsapana ny ara-dalàna.
Zava-dehibe tokoa io amin'ny fametrahana olona mandritra ny fotoanan'ny fikorontanan-tena manokana.
4. Fantatro fa sarotra…
Indraindray raha mila milaza zavatra ianao dia lazao amin'ny ellipses. Tsy misy olona mandre hoe 'fantatro fa sarotra…' no mila anao mamita izany fehezanteny izany.
Ny mody mahery dia sakana voalohany ho an'ireo maty. Avelao fotsiny azy ireo Fantaro fa ianareo fantaro ny lohasaha, ny havoana ary ny tolona izay efa zakain'izy ireo - ary haharitra - manafaka azy ireo amin'ny fomban'io fihatsaram-belatsihy io.
Amin'ny lafiny iray, dia miarahaba azy ireo mialoha noho izy ireo nahatratra ny faran'ny ny dia tsy tapaka, natanjaka ary niomana amin'ny fitsapana tsy azo ihodivirana manaraka.
5. Avelao aho hanampy
Angamba ity iray ity tsy mila lazaina.
Na eo aza ny zava-drehetra ataontsika, ny teny mampionona dia ho toy ny voa amin'ny beton hatrany ambanin'ny lanitra miloko sy fotsy.
Tianay ny mampitambatra ny fontsika sy ny sainay amin'ny an'ny hafa mba hanamaivanana ny fanaintainany, fa ny teny amin'izao fotoana izao, eny fa na dia ireo poeta aza dia tsy hahatsapa ho ampy mihitsy amin'ilay asa.
Rehefa nanam-potoana hisaintsainana ireo nidonam-pahoriana dia angamba hanao izany ny poety. Ny tononkalo dia afaka miteny amin'ny fomba takatry ny fanahy na dia tsy ny saina aza.
Saingy misy fotoana izay iantsoan'ny fotoana ny fahanginana madio sy tsotra an'ny tsy voalaza fitalahoana: avelao aho hamela ahy hijaly miaraka aminao hipetraka, hiala sasatra, ho.
Izy io dia azo ampitaina amin'ny fifamihinana tery amin'ny alàlan'ny fanolorana boaty misy sela rehefa ilaina izany nefa tsy angatahina amin'ny fanampiana ireo very alahelo hiala ny sezany na hanolotra ara-bakiteny ny sorokao mba hatory fotsiny ny lohany misy fomba iray tapitrisa mba hampisehoana fa misy olona eo.
Teny manelanelana banga. Ny 'fiaraha-miory fatratra amin'ny famoizanao,' 'fiaraha-miory amin'ny famoizanao,' 'nenina noho ny fahaverezanao' dia aloky ny zavatra ao am-ponao fotsiny.
Na inona na inona fanapahan-kevitrao holazainao amin'ny olona iray dia alao antoka fa manampy izany.
Atsangano izy ireo, miaraka amin'izy ireo, ampahafantaro azy ireo fa tsy mpamorona fangirifiriana hafa fotsiny ianao, iray izay manomboka manjavona amin'izy ireo na dia mbola tsy tanteraka aza ny adidy ara-tsosialy rehetra.
Ny maty dia hanana matoatoa ampy hifandonana ny fangorahana dia tsy maintsy mitarika anao hanan-danja.
Tsy mora mihitsy ny mahita ny teny 'marina'. Raha mora izany dia tsy hisy dikany.
Voalaza fa isika no olombelona faran'izay betsaka indrindra rehefa malahelo na mahafaly ny zava-drehetra eo anelanelany. Ny teny fangorahana dia tokony haneho ny maha-olombelona antsika.
Ireto sosokevitra ireto dia mety hanampy na tsia. Tsy natao ho lasa hajia vaovao ho solon'ny solo-bolo sy triatra izay ampiasain'ny maro amintsika ankehitriny izy ireo, mpitari-dalana fotsiny.
Ny fiainana no tsara indrindra raha avelantsika hitarika antsika ny fanaintainan'ny olombelona, ​​ny fiaraha-miory fangorahana ary ny finiavana hampiala ny fanaintainan'ny hafa, na dia vetivety fotsiny aza.
Betsaka ny azo atao ary azo lazaina mandritra ny fofon'aina.
Mitenena fampiononana ary resaho tsara izy ireo.
Fomba 9 ahafahanao manampy rehefa malahelo ny olona iray tianao
famaritana ny maha-pitia amin'ny olona iray
ny fomba hiatrehana ny lehilahy tsy mahasarika
oviana no mivoaka ny amerikana rehetra
misintona izy rehefa akaiky isika